Wasiirkii hore ee Diinta iyo Awqaafta Dalka Jabuuti oo Xabsi la dhigay xili uu dhaawac yahay | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Wasiirkii hore ee Diinta iyo Awqaafta Dalka Jabuuti oo Xabsi la dhigay xili uu dhaawac yahay
Wararka ka imaanaya Dalka Jabuuti ayaa sheegaya in ciidamada amaanka dalkaasi ay xabsiga dhigeen wasiirkii hore ee Diinta iyo Awqaafta dalka Jabuuti, Mudane Xaamud Cabdi Suldaan iyo xubno kale oo katirsan mucaaradka dalkaasi.
Afhayeenka dallada Mucaaradka ah ee USN Daahir Axmed Faarax, ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamada amaanka ay shalay xabsiga dhigeen Xaamud Cabdi Suldaan xiili uu kasoo baxay isbitaal lagu daweenayay.
Waxa uu sheegay Afhayeenka in ay wal wal xoogan ka qabaan xaalada wasiirkii hore ee Diinta iyo Awqaafta uu sheegay in uu dhaawac kasoo gaaray rabshadihii dhawaan ka dhacay Magaalada Jabuuti, waxa uuna tilmaamay in Xaamud wali uusan ka bogsoon dhaawacii soo gaaray.
Xeer-ilaaliyaha guud ee Djibouti Maki Cumar Cabdulqaadir, ayaa sheegay in la xiray 32-qof uu ku jiro wasiirkii hore ee Arrimaha Diinta iyo Aqaafta, waxa uuna tilmaamay in dadkan la xiray lagu soo oogay dacwado la xariira in ay ku lug lahaayeen rabshaddihii ka dhacay duleedka magaalada Djibouti gaar ahaan degmada Balbala.
Magaalada Jabuuti ayaa ka dhacay 21-kii December 2015-ka rabshado dad badan lagu dilay, dadka la dilay ayaana u badnaa xubno katirsan Mucaaradka Jabuuti oo xiligaasi ku sugnaa goob ay ka socotay Siyaaro.